Ode amin'i Freddie Mercury miaraka amin'ny fampiharana VR Bohemian Rhapsody Experience | Androidsis
Ode ao amin'ny VR mankany amin'i Freddie Mercury miaraka amin'i Bohemian Rhapsody Experience, voan'ny firaisan'i Google sy Queen
Freddie Mercury dia iray amin'ireo mpihira tsara indrindra mozika rock nisy hatrizay. Mpanakanto manana feo mahatalanjona sy mahery vaika izay teny an-tsehatra naneho ny talenta rehetra nananany. Mahamenatra lehibe izay nahatonga anay mbola tanora noho ny fiheverana fa mitondra ny otrikaretina VIH. Andao lazaina fa ny tontolon'ny mozika dia mbola malahelo an'ity zava-mahatalanjona voajanahary ity ary nofihinin'i Queen hatramin'ny andro farany.
Bohemian Rhapsody dia iray amin'ireo hira tsara indrindra amin'ity vondrona ity ary ankehitriny, vokatry ny firaisan'ny Google sy Queen, afaka miaina kinova vaovao hafa amin'ity hira ity isika amin'ny alàlan'ny zava-misy virtoaly. Ity fanandramana an'ity hira angano ity dia tonga amin'ny endrika fampiharana ary mankalaza ny 25 taona taorian'ny nahafatesan'i Freddie Mercury, noho izany tsy hahagaga raha nampiasa azy ny Google tamin'ny 4 Oktobra, andro hanehoana ny lohateny DayDream ho an'ny zava-misy virtoaly.
Ity fampiharana ity dia maimaimpoana efa avy amin'ny Google Play Store ary hitondra antsika any amin'ilay hira izay misy fizarana enina izay mitondra ny mpankafy mozika amin'ny karazana fahatsapana rehetra hananana cappella, ballad, solo gitara, segment operatic, faritra rock ary, farany, coda. Miresaka solo solo-gitara izay noheverina ho XNUMX tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra izahay.
Eo alohan'ny fampiharana zava-misy virtoaly dia azontsika atao ny mamily ny tenantsika jereo ny tranofiara iray manontolo mihetsika miaraka. Izy io dia traikefa nahafinaritra natolotr'ity rindrambaiko ity ary tsy manilika antsika izay tsy manana Karda, hahafahanao mandroso mamaky azy io hankafizanao ny iray amin'ireo hira rock tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Una fotoana mahafinaritra hahatadidy ilay Freddie Mercury lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ode ao amin'ny VR mankany amin'i Freddie Mercury miaraka amin'i Bohemian Rhapsody Experience, voan'ny firaisan'i Google sy Queen
UMI MAX Famerenana
World of Warcraft: Legion, ilay fampiharana miaraka amin'ny MMO tsara indrindra hatramin'izay